MANEHO NY TENANY AMIN'NY ASANY NY TOMPO | FJKM Amboniloha
Faly miarahaba anao velon’aina tra-pamonjena nahatratra ny taona vaovao 2016. “Ry malala, ho salama sy hambinina anie hianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany” (3Jao.1,2).
Ry mpamaky malala, amin’izao fiandohan’ny taona izao, mety mametram-panontaniana angamba ianao hoe: mafy sady sarotra ny lalana nalehako tamin’iny taona lasa iny kanefa dia nahoana aho no mbola velonaina toa izao fa tsy nodimandry tahaka ny sasany? Velona haninona eto amin’ity tany ity aho? Manahoana ny ho aviko? Tsarovy fa noho ny famindrampon’Andriamanitra sy ny fahasoavany no mbola maha toa izao anao. Meteza hanao tahaka an’i Paoly hoe” Kristy no antony ahavelomako” (Fil.1, 20). Apetraho amin’ny Tompo ny fanahianao rehetra; Ankino Aminy ny làlanao, ary matokia Azy fa hataony tanteraka (Sal.37, 5). Manana ny hevitra hiheverana anao ny Tompo, hitondra fiadanana fa tsy loza ho anao mba hanome fanantenana ho anao amin’ny farany (Jer.29,11). DIA MIFANKAZARA AMIN’ANDRIAMANITRA TSITOHA dia hotanteraka aminao izany teny izany.
“Andriamanitra Tsitoha, Misaotra Anao: nampifoha ny fanahiko Ianao, ny fiainako efa lao novelominao finoana, ka indro feno haravoana. Ny angatahiko ry Tompo, aoreno ny finoako, tsy hirona tsy ho rava, hijoro lalandava”. Izany tononkiram-bavaka noforonin’ny mpanakanto iray izany dia mety hahafehy izay tiana hambara aminao ankehitriny. Heverin’ny olona sasany, izay tsy mino indrindra indrindra, fa zavatra foronin’ny saina ny fisian’Andriamanitra sy ny herin’Andriamanitra ka mora ravàna ny finoana Azy. Mila anao mijoro ho vavolombelony Andriamanitra ka tsy ho voahozongozon’ireo fampianaran-diso isankarazany izay mitaona anao hiala amin’ny ny fitiavana sy ny finoana ary ny fitiavana an’Andriamanitra; Ambarao mazava ny Asampanavotana efa nataon’Andriamanitra taminao ary sahia milaza fa VELONA NY MPANAVOTRA ANAO; MIASA IZY, ARY REHEFA IZY NO MIASA DIA TSY MISY MAHASAKANA AZY. Ao amin’ny asa ataony no anehoan’Andriamanitra fa:
Andriamanitra MPAHARY NY TSARA Izy, efa niasa hatrany amin’ny fahariana izao tontolo tany am-piandohana ary ary mbola miasa mandrake ankehitriny. Tsy miova Izy omaly sy anio ary ho mandrakizay (Gen.1 sy 2; Sal.102, 27; Heb.13, 8). Aza hadinoina fa “An’i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy.” ( Sal.24, 1). Mahay manome ny zavatra rehetra hahasoa sy hahatsara anao amin’ny fotoana fantany fa mahamety izany Andriamanitra.
TOMPOn’izao rehetra izao Andriamanitra ka Izy no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao. (Sal.145,8-14; Mat.4, 10). Fandotoana ny Anarany Masina ny fanompoana na fivavahana amin’ny zavaboaary (Volana, kintana, Masoandro, fijerena tononandro na “horoscope”, vola sy harena, voninahitra, olona…) na ny fanompoan-tsampy (doany, tapakazo, fanahy ratsy, razana, ny fitazomana na fanarahana ny fampianarana voatolotry ny razana mihoatra noho ny fankatoavana an’Andriamanitra …) (Deo.18, 9-14; Rom.1, 18-25). Tsy ny natao fa ny Mpanao ary tsy ny nohariana fa ny Mpahary no natao hotompoina sy anankinana ny fiainana manontolo. Manisy soa izay mazoto mitady Azy Andriamanitra ary ATAONY SAMIHAFA NY MANOMPO AZY SY NY TSY MANOMPO AZY (Heb.11, 6b; Mal.3, 18). KOA MANOMPOA AN’I JEHOVAH AMIN’NY FIFALIANA àry e!
MISARIKA ANTSIKA HIALA AVY AO ANATY AIZINA HO AO AMIN’NY FAHAZAVANY MAHAGAGA Andriamanitra ary MANOME FIAINANA BE DIA BE, FIAINANA MANDRAKIZAY HO ANTSIKA; Tanteraka izay tamin’ny nahatongavany ho Nofo tao amin’I Jesoa Kristy Ilay MOFONAINA, (Jao.6, 22.23). Inoanao ve fa mahay manolotra anao izany Andriamanitra? Efa nandrava ny efitra (ny fahotàna) nampisaraka anao tamin’Andriamanitra teo amin’ny Hazo Fijaliana Izy. Eny, efa nandresy ny fahafatesana izay tambin’ny ota . VITA FIHAVANANA AMIN’ANDRIAMANITRA IANAO rehefa mandray an’I Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy anao (Jao.3, 16).…Koa MAHARETA àry NA DIA MARO AZA NY FAKAMPANAHY izay velarin’I Satàna eo anoloanao misarika anao hiala amin’ny finoana sy ny fitiavana Azy. Dia sanatria ve hiala amin’ny Tompo ka hanaraka izao tontolo izao noho ny vola aman-karena hianao? Dia ekenao ve ny hiankohoka amin’i Satàna sy hanao ny sitrapony mba hahazoana voninahitra izay mandalo ihany ary ho levona sy ho lo rahampitso? Fahaverezana mandrakiray anie ny iafaran’izany e! MITODIHA KA BANJINO JESOA KRISTY ILAY Teny Tonga Nofo izay Vonona handray anao mandrakariva Izy. AZA MIHERIKERIKA FOANA E, MIATOMBENA MIANDRY AN’I JEHOVAH, indrindra manoloana ny adim-piainana izay atrehinao sy mbola hatrehinao. Avelao hanjaka eo amin’ny fiainanao Izy; Ataovy izay asainy ataonao, izory izay lalana asainy alehanao na dia mety mifanipaka amin’ny eritreritrao sy ny eritreritry ny olon-kafa aza izany (Eks. 14, 1-14; Sal.32, 8). AMPANDEFERO NY HAMBOM-PONAO FA ARAHO SY ANKATOAVY NY TENIN’ANDRIAMANITRA DIA HO HITANAO NY VONINAHINY. Aoka ho Fanilon’ny Tongotrao sy ho fanazavana ny lalanao hatrany ny teniny (Sal.119, 105). Hiasa mandrakariva eo amin’ny fiainanao anie ny Tompo.
Raketo ao amponao àry ambarao amin’izay olona misarika anao hiala Amin’I Jesoa izao teny izao:
“ FANTATRO IZAY INOAKO ARY AMPY HO AHY NY FAHASOAVANY; TSY HISY HAHASARAKA AHY AMIN’NY FITIAVAN’I KRISTY, ILAY EFA NANOLOTRA NY AINY HO FANAVOTANA AHY, na loza na mosary na fanenjehana….TSY MIVADIKA AMINY AHO FA IZY NO ANTONY AHAVELOMAKO sady AHAVELOMANAO KOA”
Catégories :	Editorial	/ par AnjGab 4 février 2016